डाट्सनका गाडी नेपाली बजारमा, मूल्य रु. २४.९९ लाखबाट सुरु हुने Bizshala -
डाट्सनका गाडी नेपाली बजारमा, मूल्य रु. २४.९९ लाखबाट सुरु हुने
काठमाण्डौ । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्प प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा ड्याट्सन गो गाडीको नयाँ खरिद मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
रु २४.९९ लाखबाट प्रारम्भ हुने यस गाडीका विभिन्न ३ मोडेलहरु GO A (O), GO T र GO T(O) नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
यी गाडीहरु थापाथली तथा उत्तरढोकास्थित कम्पनीका आधिकारिक शोरुमहरु तथा नेपाल अधिराज्यभर रहेका विभिन्न १३ स्थानबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
नयाँ ड्याट्सन गो गाडीमा अभूतपूर्व विशेषताहरु रहेका छन् यसमा विद्यमान रहेको विशेषता र आरामदायी, सुरक्षा तथा स्टाइलिसबाट ड्राइभिङ्ग अनुभवको जीवन्तता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कारले नयाँ युगका लागि जापानिज प्रविधियुक्त इञ्जिन, इन्धन किफायती, बस्नका लागि धेरै स्पेस तथा सुरक्षाजस्ता पक्षहरुको सर्वोत्तम प्याकेज प्रदान गरेको छ । नयाँ ड्यट्सन गोमा २८ विभिन्न विशेषता तथा एकसय बढी अपडेटहरु रहेका छन् ।
एनड्रोइड अटोप्ले र एप्पलकार प्लेको साथ ७ इन्चको टच अडियो
१४ इन्चको डाइमन्ड–कट अल्लोइ ह्वील
सेफ्टी प्याकेज– डुयल एयर ब्याग, ABS+EBD+BA तथा पार्किङ्ग सेन्सर
२४५० एम.एमको ह्वील वेस
४.६ एम टर्निङ्ग रेडियस
नयाँ ड्याट्सन गोमा Ride Control Advanced Suspension system तथा 1.2L HR12 DE पेट्रल इञ्जिन रहेको छ, जसले प्रतिलिटर १९.८३ किलोमिटरको माइलेज प्रदान गर्दछ ।
बाहिर हेर्दा स्पोर्र्टि तथा भित्र बस्नका लागि धेरै स्पेस भएको, ड्याट्सन कारले कारधनीलाई अतिरिक्त सुरक्षा, वेस्ट–इन–क्लास स्पेस, तथा गतिशीलता प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
पायोनियर मोटो कर्प ड्याट्सन तथा निशान गाडीहरुको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो । कम्पनीले आफ्नै ४ विभिन्न स्थानमा आफ्नै शोरुम तथा ललितपुरमा रहेको भव्य र आधुनिक सर्भिस सेन्टरहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने भविष्यमा डिलर नेटवर्कको माध्यमबाट थप १२ स्थानहरुबाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
काठमाण्डौ । सबै वर्ग र पुस्ताले अत्यधिक रुचाएको र सबैको रोजाइ बन्न...
टोयोटाको फर्च्युनर टीआरडी लन्च, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । टोयोटा किर्लोस्कर मोटरले आफ्नो पपुलर एसयूबी...
‘ड्याट्सन गो’ र ‘गो प्लस’ सेप्टेम्बर २४ मा लन्च हुँदै, मूल्य
काठमाण्डौ । ड्याट्सन गो र गो प्लसको सीभीटी अटोमेटिक अप्सन भारतमा...
बर्थाको त्यो आँटले आज विश्वमै जर्मनी ‘कारहरुको देश’ को नामले
काठमाण्डौ । सन् १८८८ मा बर्था बेन्जले साबित गरेकी थिइन् कि उनका पति...
विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेशन कर्जा सरकारको
–रमेश लम्साल काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र...
सहरमा कार बिक्रीमा मन्दी आएपछि भारतका ग्रामीण इलाका रोज्दै
काठमाण्डौ । भर्खरै सम्पन्न ‘नाडा अटो शो’ले नेपालमा चारपांग्रे...
काठमाण्डौ । महिन्द्रा टु ह्वीलर्स अन्तर्गत अग्निमोटो इन्कले...
कार किन्दा विचार गर्नुहोस्, पेट्रोल कि डिजेल कार, कुन फाइदाजनक
काठमाण्डौ । काठमाण्डौमा अटोमोबाइल्सको कुम्भ मेला नाडा अटो शो...